Penguin 2.0: तपाईंले जान्नुपर्ने चार तथ्यहरू | Martech Zone
Penguin 2.0: तपाईंले जान्नुपर्ने चार तथ्यहरू
शुक्रबार, मे 24, 2013 शुक्रबार, मे 24, 2013 जेसन डीएमर्स
यो भयो। एउटा ब्लग पोष्टको साथ, एक एल्गोरिथ्म को रोलआउट, र प्रशोधन को केहि घण्टा, Penguin 2.0 खोलिएको छ। इन्टरनेट कहिल्यै एक जस्तै हुँदैन। म्याट कट्सले मे २२, २०१ 22 मा यस शीर्षकमा एउटा संक्षिप्त पोस्ट प्रकाशित गर्नुभयो। यहाँ चार मुख्य बुँदाहरू छन् जुन तपाईंलाई पेन्ग्विन २.० को बारेमा जान्नुपर्दछ।
१. पेन्गुइन २.० ले सबै अंग्रेजी-अमेरिकी प्रश्नहरूको २.1% लाई प्रभाव पारेको छ।
नत्र २.2.3% तपाईलाई सानो संख्या जस्तै ध्वनि दिनुहोस्, ध्यान दिनुहोस् कि त्यहाँ प्रति दिन अनुमानित billion अरब गुगल खोजीहरू छन्। Billion अर्बको २. billion% धेरै हो। एकल सानो व्यापार वाणिज्य साइट पर्याप्त यातायात र राजस्व को लागी २ different० विभिन्न प्रश्नहरु मा निर्भर हुन सक्छ। प्रभाव थोरै दशमलव संख्या भन्दा बढि ठूलो छ।
तुलना गरेर, Penguin 1.0 सबै वेबसाइटहरूको affected.१% लाई प्रभावित गरियो। त्यसको विनाशकारी नतिजा याद छ?
२. अन्य भाषाका प्रश्नहरू पनि पेन्गुइन २.० बाट प्रभावित हुन्छन्
यद्यपि गुगलका धेरै जसो प्रश्नहरू अ conducted्ग्रेजीमा सञ्चालन हुन्छन्, त्यहाँ अन्य भाषाहरूमा सयौं करोड प्रश्नहरू छन्। गुगलको एल्गोरिथमिक प्रभाव यी अन्य भाषाहरूमा फैलिन्छ, एक वैश्विक स्तरमा वेबस्प्याममा एक ठूलो किबोश राख्दै। भाषाहरू जसमा वेबसाइटस्प्यामको उच्च प्रतिशतले बढी असर गर्दछ।
The. एल्गोरिदम एकदम परिवर्तन भएको छ।
यो ध्यानमा राख्नु महत्वपूर्ण छ कि Google लाई पूर्ण रुपमा Penguin 2.0 मा एल्गोरिथ्म परिवर्तन गरियो। यो केवल डाटा रिफ्रेस होईन, जबकि "२.०" नामकरण योजनाले यस तरीकाबाट यसलाई ध्वनि बनाउँदछ। नयाँ एल्गोरिथ्म भनेको पुरानो स्पामी ट्रिकहरू अब काम गर्दैन।
स्पष्ट रूपमा, यो हामी पहिलो पटक पेन्ग्विन भेट भएको छैन। यहाँ पेन्गुइनको बुलेट-पोइन्ट ईतिहास छ।
अप्रिल २,, २०१:: पेन्गुइन १. पहिलो पेन्गुइन अपडेट अप्रिल २ 24, २०१२ मा आएको थियो, र%% भन्दा बढी प्रश्नहरूलाई प्रभाव पारेको थियो।
मे २,, २०१:: पेन्गुइन अपडेट। एक महिना पछि, गुगलले एल्गोरिथ्मलाई स्फूर्ति दियो, जसले क्वेरीहरूको अंशलाई प्रभाव पार्छ, करीव ०%
अक्टुबर,, २०१:: पेन्गुइन अपडेट। २०१२ को गिरावटमा, Google ले फेरि डाटा अपडेट गर्‍यो। यस पटक प्रश्नहरूको करीव ०.।% प्रभावित भए।
मे २२, २०१ 22: पेन्ग्विन २.० रिलिज हुन्छ, सबै प्रश्नहरूको २.2013% लाई असर गर्दछ।
कट्सले २.० को बारेमा वर्णन गरे अनुसार, "यो एल्गोरिदमको एकदम नयाँ पिढी हो। पेंगुइनको अघिल्लो पुनरावृत्ति केवल साइटको गृह पृष्ठमा मात्र हेर्नेछ। पेन्गुइनको नयाँ पुस्ता धेरै गहिरो जान्छ र केहि साना क्षेत्रहरूमा वास्तवमै ठूलो प्रभाव पार्दछ। "
पेन्गुइनले प्रभावित वेबमास्टरहरूले प्रभाव अधिक कडा पार्ने छ, र यो पनि निको हुन धेरै समय लिन सक्दछ। यो एल्गोरिथ्म गहिरो जान्छ, यसको प्रभाव सम्भावित उल्ल in्घनमा लगभग सबै पृष्ठमा ट्रिक गर्दछ।
There. त्यहाँ थप पेन्गुइनहरू हुनेछन्।
हामीले पेन्गुइनको अन्तिम सुनेका छैनौं। हामी एल्गोरिथ्मको थप समायोजनहरू अपेक्षा गर्दछौं, किनकि गुगलले प्रत्येक एकल एल्गोरिथमिक परिवर्तनको साथ गरेको छ जुन उनीहरूले कहिल्यै गरेका छन्। एल्गोरिदमहरू सधैं परिवर्तन हुने वेब वातावरणको साथ विकसित हुन्छन्।
म्याट कट्सले उल्लेख गरे, "हामी प्रभाव समायोजन गर्न सक्दछौं तर हामी एउटा तहमा सुरू गर्न चाहन्थ्यौं र त्यसपछि चीजहरू उचित रूपमा परिमार्जन गर्न सक्दछौं।" उसको ब्ल्गमा एक टिप्पणीकर्ताले गुगलले "लि spam्क स्प्यामर्सका लागि अपस्ट्रीम मानलाई इन्कार गर्दैछ" भन्ने बारेमा विशेष सोध्यो र श्री कट्सले जवाफ दिए, "त्यो पछि आउँछ।"
यसले बढ्दो कडाई गर्ने सुझाव दिन्छ र, सायद, केहि ढिलाइका लागि, अर्को केही महिनाको अवधिमा पेन्गुइन २.० को प्रभावको।
धेरै वेबमास्टरहरू र एसईओहरू अन्यथा स्वस्थ साइटमा एल्गोरिथ्म परिवर्तनको नकरात्मक प्रभावमा बुझेर निराश भएका छन्। केहि वेबमास्टरहरू आलामा अवस्थित छन् जुन वेबस्प्याममा पौंडीरहेका छन्। तिनीहरूले महीनाहरू वा वर्षहरू व्यतीत गरेको छ ठोस सामग्री सिर्जना गर्न, उच्च-अधिकार लिंकहरू निर्माण गर्दै, र एक वैध साइट क्राफ्टिंग। अझै, नयाँ एल्गोरिथ्मको रिलिजका साथ उनीहरूले दण्डको पनि अनुभव गर्छन्। एउटा सानो-बिज वेबमास्टरले विलाप गरे, "के यो अधिकारहीन साइट निर्माण गर्न गत वर्ष लगानी गर्नु मेरो मूर्खता हो?"
सान्त्वनामा, कट्सले लेखे, "हामीसँग केही चीजहरू यस ग्रीष्मकालीन पछि आउँदैछन् जुन तपाईंले उल्लेख गर्नु भएका साइटहरूको प्रकारलाई मद्दत पुर्‍याउनुपर्दछ, त्यसैले मलाई लाग्छ कि तपाईंले अधिकार निर्माणमा काम गर्न सही छनौट गर्नुभयो।"
समयको अन्तर्गत, एल्गोरिथ्म अन्ततः वेबस्प्यामको साथ समातिन्छ। त्यहाँ प्रणाली खेल गर्न केहि तरिकाहरू हुनसक्दछन्, तर जब खेलहरू पांडा वा पेन्गुइन बल-मैदानमा हिड्दछन् तब खेलहरू एक रोचक रोकिन्छ। यो सँधै उत्तम हुन्छ खेलका नियमहरू पालना गर्न.
के तपाई Penguin 2.0 बाट प्रभावित हुनुहुन्छ?
यदि तपाईं सोचिरहनु भएको छ भने पेंगुइन २.० ले तपाईंलाई असर गरेको छ कि छैन, तपाईं आफ्नै विश्लेषण गर्न सक्नुहुन्छ।
तपाइँको कुञ्जी शब्द श्रेणीकरण जाँच गर्नुहोस्। यदि तिनीहरूले मे २२ मा सुरु हुने हदसम्म अस्वीकार गरेमा, त्यहाँ एक राम्रो मौका छ कि तपाइँको साइटलाई प्रभावित छ।
सबैभन्दा लिंक निर्माण फोकस प्राप्त गर्ने पृष्ठहरूको विश्लेषण गर्नुहोस्, उदाहरणका लागि तपाईंको गृह पृष्ठ, रूपान्तरण पृष्ठ, कोटी पृष्ठ, वा ल्यान्डि page पृष्ठ। यदि ट्राफिक एकदमै घट्यो भने, यो पेन्गुइन २.० प्रभावको संकेत हो।
कुनै विशेष कुञ्जी शब्दहरूको सट्टा कुञ्जी शब्द समूहहरूको कुनै सम्भावित र्याकिंग परिवर्तनहरू हेर्नुहोस्। उदाहरण को लागी, यदि तपाइँ "विन्डोज वीपीएस" को लागी रैंक गर्न चाहानुहुन्छ, जस्तै "विन्डोज वीपीएस होस्टिंग," "विन्डोज वीपीएस होस्टिंग पाउनुहोस्," र अन्य समान कुञ्जी शव्दहरू।
तपाईंको जैविक यातायात गहिरो र फराकिलो ट्र्याक गर्नुहोस्। गूगल विश्लेषण तपाईंको साथी हो तपाईंको साइटको अध्ययन गर्दा, र कुनै पनि प्रभावबाट पुनः प्राप्त गर्नुहोस्। जैविक यातायातको प्रतिशतमा विशेष ध्यान दिनुहोस्, र त्यसो गर्नुहोस् तपाईंको सबै मुख्य साइट पृष्ठहरूमा। उदाहरण को लागी, कुन पृष्ठहरु मा जैविक यातायात को अत्यधिक मात्रा को लागी अप्रिल २१ - मे २१ को महीना को लागी पत्ता लगाउनुहोस्। त्यसपछि, पत्ता लगाउनुहोस् कि यी संख्याहरु मे २२ देखि सुरु गरिएको छ कि छैन।
अन्तिम प्रश्न "म प्रभावित भएन," होइन तर "अब म के गरिरहेछु कि म प्रभावित भइरहेको छ?"
यदि तपाइँ पेन्गुइन २.० बाट प्रभावित हुनुभएको छ भने, तपाईले के गर्नु पर्छ यहाँ छ।
Penguin 2.0 बाट कसरी पुन: प्राप्ति गर्ने
1 कदम। आराम यो ठिक हुनेछ।
2 कदम। तपाईंको वेबसाइटबाट स्प्यामी वा कम-गुणवत्ता पृष्ठहरू पहिचान गर्नुहोस् र हटाउनुहोस्। तपाईंको साइटमा प्रत्येक पृष्ठको लागि, आफैलाई सोध्नुहोस् कि यसले वास्तवमै प्रयोगकर्ताहरूका लागि मूल्य प्रदान गर्दछ वा यो प्रायः खोजी इन्जिन चाराको रूपमा अवस्थित छ। यदि सहि उत्तर यदि उत्तरार्द्ध हो भने त्यसो हो भने तपाईंले या त बढाउनुपर्दछ वा तपाईंको साइटबाट पूर्ण रूपमा हटाउनुपर्दछ।
चरण 3। स्प्याम्मी इनबाउन्ड लिंकहरू पहिचान गर्नुहोस् र हटाउनुहोस्। कुन लिंकले तपाईंको र ranking्किंगलाई तल ल्याउन सक्छ र तपाईं पेन्गुइन २.० बाट प्रभावित हुने कारण पहिचान गर्न, तपाईंले एक प्रदर्शन गर्न आवश्यक छ इनबाउन्ड लिंक प्रोफाइल अडिट (वा एक पेशेवर तपाइँको लागी गर्नुहोस्)। तपाईले पहिचान गरिसक्नुभयो कि कुन लिंकहरू हटाउनु पर्ने हुन्छ, वेबमास्टर्सलाई ईमेल गरेर र उनीहरूको वेबसाइटमा लिंक हटाउन विनम्रतापूर्वक सोधेर उनीहरूलाई हटाउने प्रयास गर्नुहोस्। तपाईंले तपाईंको हटाउने अनुरोधहरू पूर्ण गरेपछि, ती पनि प्रयोग नगर्दै निस्क्रिय हुनुहोस् Google को Disavow उपकरण.
4 कदम। नयाँ इनबाउन्ड लिंक निर्माण अभियानमा संलग्न हुनुहोस्। तपाईंले गुगललाई प्रमाणित गर्न आवश्यक छ कि तपाईंको वेबसाइट खोजी परिणामहरूको शीर्षमा स्तर निर्धारण योग्य छ। त्यसो गर्नका लागि तपाईलाई विश्वासिलो तेस्रो पक्षहरूबाट विश्वासका केही मतहरू चाहिन्छ। यी मतहरू Google ट्रस्टले अन्य प्रकाशकहरूबाट आगमन लिंकहरूको रूपमा आउँदछन्। गुगलले तपाईंको प्राथमिक कुञ्जी शव्दहरूको खोजी परिणामहरूको शीर्षमा रैंकिंग गर्ने प्रकाशकहरूलाई पत्ता लगाउनुहोस् र उनीहरूलाई पाहुना ब्लग पोष्ट गर्ने बारेमा सम्पर्क गर्नुहोस्।
अगाडि बढ्ने ठोस SEO रणनीतिले कालो ह्याट प्रविधिहरू स्वीकार गर्न वा यसमा संलग्न हुन अस्वीकार गर्दछ। यो स्वीकार र एकीकृत हुनेछ एसईओ को3स्तम्भहरू एक तरीकाले जुन प्रयोगकर्ताहरूको लागि मूल्य थप गर्दछ र विश्वास, विश्वसनीयता, र अधिकार स्थापना गर्दछ। शक्तिशाली सामग्रीमा फोकस गर्नुहोस्, र साइटहरू सफल हुन मद्दतको प्रमाणित रेकर्डको साथ प्रतिष्ठित एसईओ एजेन्सीहरूसँग मात्र काम गर्नुहोस्।
टैग: Google +पेंगुइनपेन्गुइन २.०खोज इन्जिन अनुकूलनएसईओ
पहिलो टच, अन्तिम टच, मल्टी टच
Mashable बाट मार्केटिंग बजवर्ड्स